ILMAAN OROMOO AFUR WARAANA WAYYAANEETIIN UKKAAMFAMAN! – Kichuu
HomeAfaan OromooILMAAN OROMOO AFUR WARAANA WAYYAANEETIIN UKKAAMFAMAN!
ILMAAN OROMOO AFUR WARAANA WAYYAANEETIIN UKKAAMFAMAN!
Godina Lixa Shaggar Aanaa Ada’aa Bargaatti guyyaa kaleessaa jechuun Hagayya 01/2017017 ilmaan Oromoo afur (4) Mogor irraa gara Finfinneetti osoo imalaa jiranuu Waraana Mootummaa Wayyaaneetiin Magaalaa Incinniitti qabamanii dararamaa jiru. Ilmaan Oromoo osoo nagaan karaa adeemanuu Waraana Wayyaaneetiin ukkaamfaman kunniin;
1. Bulchaa Araarsaa
2. Dabalaa Isheetii
3. Seenessaa Wayyeessaafi
4. Dandanaa Dirribaa kanneen jedhaman yommuu tahu, mootummaan Wayyaanee guyyaa guyyaan Beektota, Hoggantoota, Qeerroofi Qarree, Barattoota, Artistoota, Daldalaafi Qonnaan Bultoota Oromoo ajjeessaa, jumlaan mana hidhaatti guuree dararaa jiraachuun ifaadha.
Haata’u malee, haalli ilmaan Oromoo muraasa (keessattuu, gama miidiyaa hawaasaan) Irraa calaqqisaa jiru waan haalaan nama qaaneffachiisu. Kanaafuu, yoo danda’an ummata cinaa dhaabbachuu, dadhabdanimmoo ummata diiguuf carraaquu irraa of qusachuun barbaachisaadha.
Eritrea,Generational gathering witnessed in Scandinavian festival!